Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo la sheegay in heegan la geliyay, si ay ugu dhaqaaqaan Degmada Sablaale | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo la sheegay in heegan la geliyay, si...
Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo la sheegay in heegan la geliyay, si ay ugu dhaqaaqaan Degmada Sablaale
Ciidanka Xooga Dalka iyo Xoogaga Midowga Afrika Somaliya, ayaa waxay isku diyaarinayaan weerar ka dhan ah Degmada Sablaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose, oo ay gacanta ku heyso Al Shabaab.
Sablaale waa Degmada kaliya ay Shabaabku ka jooggaan Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana horey looga fara maroojiyay gacan ku haynta Degmooyinka Afgooye, Wanlaweyn, Qoryooley, Marka, Baraawe, Kuntuwaarey iyo Buulo Mareer. Inkastoo Buulo Mareer Dowladdii Shariifka ay u aqoonsatay degmo, oo aynaan horey uga mid ahayn Degmooyinka rasmiga ah ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Korneyl C/raxmaan Maxamed oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xooga, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in heegan la geliyay Ciidamada Dowladda iyo Amisom, si ay gacanta Dowladda u soo geliyaan Degmada Sablaale.
Korneyl C/raxmaan Maxamed oo wareysi siiyay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu xusay inay amar ka suggayaan Madaxda Dowladda Somaliya, ka hor inta aynaan ku dhaqaaqin Sablaale, sida uu yiri.
Sarkaalkaan, ayaa ku waramaaya inay horey gacanta Dowladdu u soo geliyeen inta badan dhulka Gobolka Shabeellaha Hoose, marka laga soo taggo meelo yar yar, oo ay kaga sugan yihiin Shabaabka.
Korneylka waxa uu ku cago jugleeyay inay soo gaba gabeen doonaan mintidiinta Ururka Al Shabaab, ee weerarada ka geysanaaya Gobolka Shabeellaha Hoose.
Hadalka ka soo yeeray Sarkaalkaan waxa uu ku soo aadayaa, xilli aroornimadii hore ee Isniintii Gobolkaasi lagu dilay 12 askari oo ka tirsan Ciidanka Xooga, markii weeraro la soo qorsheeyay ay Shabaabku ku galeen deegaanada Warmaxan iyo Tixsiile.